Bogga loogu talagalay Kordhinta Shell ee GNOME hadda waa nool yahay | Laga soo bilaabo Linux
Hadda waxaa heli kara dhammaan adeegsadayaasha GNOME Shellisagaa ah goobta in Mashruuca GNOME bilo yar ka hor ku dhawaaqay inuu kordhin kordhinta jawiga desktop-kan
Hindisahan, markii uu si buuxda u hawl galo, wuxuu si weyn u fududayn doonaa rakibidda kordhinta GNOME Shell, oo ah nidaam maanta si cad uga soo horjeedda caqliga iyo cakiran.
Xaaladda hadda jirta extensions.gnome.org Waa "alfa dadweynaha", in kasta oo ay goor hore tahay horumarkiisa, haddana waxay durba u oggolaaneysaa isticmaaleyaasha GNOME 3.2 inay si toos ah websaydhka uga fidiyaan GNOME Shell.
Boggan, oo si cad u waxyooday mid ka mid ah kuwa ay soo saareen dadka ku nool Mozilla ee loogu talagalay biraawsarkooda Firefox, sidoo kale wuxuu awood u leeyahay inuu ku dhejiyo kororkaaga.
Tag Kordhinta GNOME
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » Bogga loogu talagalay Kordhinta Shell ee GNOME hadda wuu nool yahay
Weyn Waxaan isticmaalayaa Mint 12 waxaanan isku dayay Mate laakiin waa cagaar. (ma laha tilmaame batari guddiga, faahfaahin dheeri ah ma leh) Kordhintaan waxaad si gaar ah wax uga beddeli kartaa qolofka gnome.